Fitaovana 5 hanaovana afisy an-tserasera | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | Graphic Design, Fitaovana famolavolana
Ny afisy dia a fomba tena tsara hanambarana karazana hetsika, tetikasa na fandraisana andraikitra. Zava-dehibe ny famolavolana azy, satria izay mahita azy dia hijanona hamaky azy ireo fotsiny raha toa ka mitokona ampy. Inona koa, ny fampahalalana eo amin'ny afisy dia tsy maintsy alamina sy azo vakina tsara. Noho izany, ny fanapahan-kevitra rehetra raisinao dia manan-danja, ny typografia, ny haben'ny lahatsoratra, ny loko, ny sary, ny antsipiriany rehetra dia tsy maintsy tandremana. Ny fisafidianana programa tsara hamoronana azy ireo dia mety hanamora ny asanao ary, Soa ihany, androany tsy mila mahay mahay mamolavola sary vao a afisy mahaliana sy misarika ny saina. Misy fitaovana maimaimpoana marobe amin'ny Internet mamela anao hamorona atiny haingana sy mora. Amin'ity lahatsoratra ity dia nifantina Fitaovana 5 hanaovana peta-drindrina an-tserasera Aza adino izany!
1.1 Ahoana ny fomba famoronana afisy ao amin'ny Adobe Spark
2.1 Ahoana ny fomba fanaovana afisy amin'ny Poster Factory
3.1 Ahoana ny fomba famolavolana afisy ao Crello
4.1 Ahoana ny fomba famolavolana afisy any Canva
5.1 Ahoana ny fomba famolavolana afisy amin'ny Fotojet
Adobe Spark fampiharana izany noforonin'i Adobe Systems ho an'ny tranonkala sy fitaovana finday. Miaraka amin'ity programa ity afaka mamorona atiny manintona be ianao, pejin-tranonkala, horonan-tsary fohy ary sombin-tserasera ho an'ny tambajotra sosialy. Na dia tsy afaka miditra amin'ny loharanon-karena rehetra fotsiny ianao amin'ny famandrihana feno karama, dia manana be dia be ianao loharanom-bola maimaim-poana miaraka amin'ny famandrihana maimaim-poana. Adobe Spark dia manome modely, izany dia a safidy tena tsara raha mila mamorona afisy mahaliana ianao, voalamina tsara ary amin'ny fotoana fohy. Ary, raha tianao, afaka manomboka amin'ny rakitra banga ianao ary volavolao ny tenanao.
Ahoana ny fomba famoronana afisy ao amin'ny Adobe Spark
Ao amin'ny efijery an-trano, eo an-tampony, ianao dia manana motera fikarohana. Raha manoratra afisy na afisy eo ianao dia hahazo maodely marobe. Ny endriny tsirairay dia azo ovaina tanteraka, mba hahafahanao mampifanaraka azy amin'ny fombanao sy ny zavatra ilainao.
Mitantana ny programa tena intuitive izany. Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny maodely, hisokatra ho azy ny famolavolana. Eo amin'ny efijery hahita bara roa ianao: eo ankavanana, azonao atao ny manitsy ny any ambadika, ny loko ary afaka manova ny haben'ny afisy aza ianao satria ny endriny dia hifanaraka amin'ny refy vaovao; Ao amin'ny iray amin'ny ankavia, azonao atao ny manampy lahatsoratra, sary, sary masina, logo ary loharano hafa. Rehefa vita, azonao atao ny misintona na mamoaka azy mivantana amin'ny tambajotran-tseraserao sosialy. Ny hany lesoka dia ny hoe raha tsy misoratra anarana ianao dia hamonjy ap ap miaraka amin'ny apmari-drano kely amin'ny zoro ambany ambany.
Poster Factory dia mpamoaka lahatsoratra an-tserasera eritreritra manokana mamorona afisy, afisy, taratasy ary bokikely avy amin'ny maodely, mora sy haingana be. Ao anatin'ny tranonkala ho hitanao ireo maodely misy loko sy habe samihafa, ary ny zavatra tsara indrindra dia izy rehetra maimaimpoana ary azo ovaina.
Ahoana ny fomba fanaovana afisy amin'ny Poster Factory
Mora ny mamorona afisy ao amin'ity mpamoaka lahatsoratra ity. Rehefa miditra amin'ny tranonkala, jereo eo an-tampon'ny efijery ny teny hoe "môdely" Raha te hiditra amin'ny volavola rehetra dia safidio izay maharesy lahatra anao indrindra ary ampiasao ny fiasa Poster Factory hampifanaraka azy amin'izay tianao. Eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery ianao dia manana ireo singa rehetra mandrafitra ny afisy voalamina mifanaraka amin'ny toe-javatra misy azy ireo. Ao amin'ny bara ambony no ahitanao fitaovana hanovana sy hamita ny endrikao. Azonao atao ny manova ny zava-drehetra, ny lahatsoratra, ny loko ary azonao atao koa ny manampy singa vaovao.
Crello dia fitaovana famolavolana sary an-tserasera maimaimpoana tanteraka izay hanampy anao hamorona atiny haingana sy mora. Ao anatin'ny fandaharana ho hitanao ny karazana maodely rehetra, fisehon'ny haino aman-jery sosialy, lohateny bilaogy, mari-pankasitrahana, ary peta-drindrina sy sora-baventy mazava ho azy. Inona koa, afaka mahazo loharanom-pahalalana isan-karazany ianao izany dia hanampy anao hampanan-karena ny zavaboarinao ary hanome azy io ny fifandraisanao manokana.
Ahoana ny fomba famolavolana afisy ao Crello
Mamorona afisy ao Crello mila mandeha amin'ny efijery an-trano fotsiny ianao ary amin'ny milina fikarohana dia soraty ny teny hoe "afisy". Amin'ity fomba ity dia hidiranao amin'ireo modely samihafa atolotry ny programa. Tsindrio ilay tianao indrindra ary mila manitsy azy fotsiny ianao mba hahatonga azy ho tonga lafatra ho anao. Ao amin'ny bara eo ankavanana dia hahita takelaka iray izay manome fidirana amin'ny fitaovana samihafa ianao. Azonao atao ny manampy sary, zavatra, lahatsoratra ary mampakatra ny loharanonao manokana aza. Rehefa vitanao azonao atao ny misintona ny volavola anao na mizara azy mivantana amin'ny tambajotra sosialinao. Raha aleonao ny tsy miasa miaraka amina modely dia afaka manomboka amin'ny fisie foana ianao, mifantina eo amin'ny efijery an-trano "Haben'ny namboarina" ary miditra ny refy mifanaraka amin'izany (soso-kevitra aho 42 x 59.4).
ny toaka dia iray amin'ireo fitaovana famolavolana an-tserasera malaza sy be mpampiasa indrindra rehefa mamorona karazana atiny rehetra. Ny programa dia manolotra modely isan-karazany miaraka amina endrika mahaliana ary azo ovaina tanteraka. Azonao atao ny manao na inona na inona, karatra fandraharahana, afisy, horonan-tsary, lahatsoratra amin'ny tambajotra sosialy, fampisehoana ... EMaimaimpoana ny fidirana any Canva, na dia misy aza ny loharanom-pahalalana sasany tsy misy afa-tsy amin'ny fisoratana anarana pro. Na izany aza, afaka mahazo valiny tsy mampino amin'ny alàlan'ny loharano maimaimpoana fotsiny ianao, ampy izay ary, ankoatr'izay, azonao atao foana ny mampakatra ny loharanonao manokana hanitatra izay azonao atao. Ny famolavolana peta-drindrina amin'ity sehatra ity dia hevitra tena tsara, satria na eo aza ny Internet, ny kalitaon'ny zavatra azonao dia optimal ary mitovy afaka manampy anao izany raha tsy manana fahaizana manao sary be dia be ianao.
Ahoana ny fomba famolavolana afisy any Canva
Canva fitaovana mora ampiasaina, noho izany dia tsy hanana olana ianao raha mampifanaraka izany. Mba hanaovana afisy ao Canva dia tsy maintsy mandeha any amin'ny motera fikarohana izay eo an-tampon'ny an-trano ary miditra ny teny "afisy" na "afisy". Haneho anao ny maodely isan-karazany ny programa, miaraka amin'ny fomba sy paleta samihafa. Inona koa, azonao atao ny manivana amin'ny loko, hitazomana ireo izay mahaliana anao indrindra. Na izany na tsy izany, raha tianao ny endriny iray, saingy tsy maharesy lahatra anao ny loko, tadidio izany ny palette azo ovaina foana.
Rehefa tsindrio ny iray amin'izy ireo dia vonona ny hanomboka fanovana ianao! Canva miasa tena mitovy amin'ny Crello. Ao amin'ny tontonana ankavanana dia azonao atao ny miditra amin'ilay loharanom-pahalalana samihafa ary amin'ny tontonana marindrano dia ho hitanao ny fitaovana lehibe.
iray hafa programa famolavolana an-tserasera manolotra fiasa mitovy amin'ny Crello sy Canva dia Photojet. Amin'ity sehatra ity hahita maodely marobe koa ianao sy loharano izay hanampy anao hamorona sombin-javatra tsy mampino. Ankoatry ny fahaizany mametaka endrika, azo atao ihany koamanova sary na mamorona collage Iray ihany ny rehetra! Tombony iray hafa dia ny fampiasana azy tsy mila misoratra anarana akory ianao. Ny hany lesoka hitako dia hoe raha te-hamorona rakitra mahazatra ianao dia tsy maintsy mandoa ny fisoratana anarana pro.
Ahoana ny fomba famolavolana afisy amin'ny Fotojet
Manamboatra afisy amin'ny Fotojet, ao amin'ny home Page tsindrio ny bokotra "Mamorona endrika." Hampiseho aminao ny maodely fampiasa indrindra ny programa. Ao amin'ny sehatra Marketing, tsindrio ny "afisy" ary safidio ny endrika ilainao. Izay, eny, alao antoka fa tsy nasiana satro-boninahitra izy, satria midika izany fa voaloa ny modely.
Ny fanovana amin'ny Fotojet dia tsotra, eo amin'ny tontonana mety azonao ataomanampy lahatsoratra sy loharano hafa. Ny fipihana ny singa rehetra dia hampiseho ireo fitaovana ilaina rehetra hanovana azy. Rehefa vitanao, pAzonao atao ny misintona ny noforoninao na mizara azy amin'ny tambajotra sosialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Fitaovana 5 hanaovana peta-drindrina an-tserasera
Textures textures: aiza no hampidinana azy ireo